Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » I-SKAL Yokunyula uMongameli weHlabathi eNtsha: Dibana noBurcin Turkkan, umntu waseTurkey-waseMelika okhuthazwayo ukuba athabathe olu mngeni
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iintlanganiso • iindaba • abantu • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • yokuzonwabisa
Burcin Turkkan, uMgqatswa woMongameli weHlabathi kwiQela leKrisimesi le-SKAL Orlando
I-SKAL imalunga nobuhlobo phakathi kweengcali zokuhamba kunye nezokhenketho kwihlabathi jikelele. Ikwamalunga nesethi yesakhiwo seenkcazo-ntetho ezikwinqanaba eliphezulu kulo mbutho. Imbabala iyama nomongameli wehlabathi. eTurboNews udibana nomgqatswa ekuphela kwakhe kulo msebenzi, uBurcin Turkkan.
I-SKAL imalunga nokwenza ishishini phakathi kwabahlobo.
Aba bahlobo bakumazwe ali-102 ehlabathini lonke.
I-American / Turkish go-getter izama ukufumana iivoti ezifunekayo zokuqinisekisa i-55% ngoDisemba 10 kwi-General Assembly ye-SKAL ezayo kwiveki ezayo ukuba ibe ngumongameli wehlabathi olandelayo wombutho wehlabathi.
UBurcin Turkkan wayengumongameli wangaphambili we-SKAL USA kwaye ngoku uzama ukufumana amavoti ukuba abe nguMongameli weHlabathi olandelayo wombutho.
Yasekwa ngo-1934, iSkål International kuphela kombutho wobuchwephesha okhuthaza ihlabathi Tourism kunye nobuhlobo, ukumanya onke amacandelo oshishino lwezoKhenketho.
Likhuthazwa ngamava alo nobuhlobo obuhle bezizwe ngezizwe obabakho kolu hambo, iqela elikhulu labachwephesha elalikhokelwa nguJules Mohr, uFlorimond Volckaert, uHugo Krafft, uPierre Soulié, noGeorges Ithier, lafumana iSkål Club eParis ngoDisemba 16, 1932.
Umbono wobudlelwane bamazwe ngamazwe phakathi kweeNgcali zezoKhenketho wakhula, kwaye ekuqaleni kuka-1934 kwakukho iiKlabhu ezili-12 ezazisekiwe kumazwe amahlanu. Kwaba ngelo xesha kwavela ingcamango yokudala intsebenziswano, edibanisa zonke iiKlabhu, ngenjongo yokukhuthaza ukuthanda kunye nobuhlobo kumacandelo okuHamba kunye noThutho emhlabeni jikelele.
I-'Association Internationale des Skål Clubs' (AISC) yasekwa nge-28 ka-Epreli, ngo-1934 kwi-Hotel Scribe eParis, kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo eyenziwe ngabathunywa abangama-21, abameli beeklabhu ezili-11, kunye nabakhi-mkhanyo ababini abavela eLondon, abathi kunye bonyula iKomiti eLawulayo. , phantsi kosihlalo kaFlorimond Volckaert:
Namhlanje ngaphezu 12923 amalungu, ebandakanya abaphathi kunye nabaLawuli boshishino, badibana kumanqanaba eNdawo, eSizwe, eNgingqi nakwamanye amazwe ukwenza ushishino phakathi kwabahlobo ngaphezu koku. 318 Skål Clubs.
Iyunithi esisiseko ye-Skål International yiKlabhu, eza kusebenza njengekhonkco le-Skål International kwimisebenzi ye-Skål ngaphakathi kwemida yejografi yeKlabhu.
namhlanje eTurboNews Breaking News Show wajoyina SKAL Orlando, Florida club kumbhiyozo SKAL Christmas nge UBurcin Turkkan uzimase..
UBurcin Turkkan wathi:
Kube lilungelo lam ukusebenza kwiBhodi yesiGqeba saMazwe ngaMazwe ye-Skål njengoMlawuli wakho kunye noSekela Mongameli oPhezulu kule minyaka mi-2 idlulileyo. Kwi-SI AGA ezayo eya kuba nge-10 kaDisemba, ngo-2021, ngentsimbi yesi-5 kusasa nge-CET ndimele unyulo lokuba nguMongameli wakho olandelayo weHlabathi we-Skal International. Njengesiqhelo ndiyayibulela inkxaso yenu epheleleyo kunye nokundithemba kwaye ndiya kuhlala ndikwinkonzo yenu ngamaxesha onke. Kubuhlobo kunye noSkal.
USebastian Samuel uthi:
NgoDisemba 6, 2021 kwi-09: 33
IBlog elunge kakhulu ndikonwabele ukuyifunda Nceda Yabelana ngoLwazi oluninzi olufanele ukuyifunda kwaye isikhokelo sobuchwephesha siyimfuneko kumashishini okuqala ukuze ukwazi ukunxibelelana nathi !!
NgoDisemba 6, 2021 kwi-04: 54
Enkosi kakhulu ngokwazisa iSkal.
Ndingathanda ukudibana nawe ngeSkype okanye Zoom!
CETINAY AKSOY uthi:
NgoDisemba 5, 2021 kwi-15: 58
Ndililungu le-Izmir/Turkey SKAL. Ngokwemithetho, akukho sizathu sokuba uBurçin TÜRKKAN, okuphela komgqatswa, anganyulwa. Ndimxhasa ngentliziyo yam yonke.
imali mboleko ye-cannabis real estate uthi:
NgoDisemba 5, 2021 kwi-09: 09
Ndingathanda kwakhona ukuvuma. Umongameli weSkål International. IBhunga, uBernard Whewell, okwahlala kwiKomiti eLawulayo. Inkqubo yokuGqibela Ukwazisa ngewebhusayithi yesigama sofikelelo olutsha oluvela kuPhando lwe-ICS kwaye ujonge imiqathango yelizwekazi kunye neenkcazelo zayo.